ကုန်ဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်မှု ကြောင့် တရုတ် ပြည်တွင် ထရပ်ကား မောင်းသူများ သုံးရက် မြောက် ဆက်လက် ဆန္ဒပြ | Freedom News Group
ကုန်ဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်မှု ကြောင့် တရုတ် ပြည်တွင် ထရပ်ကား မောင်းသူများ သုံးရက် မြောက် ဆက်လက် ဆန္ဒပြ
by FNG on April 23, 2011	ရွပ်ရွပ် ချွံချွံ ဆန္ဒပြသည့် ထရပ် ကား မောင်း သူ တစ်ဦး ကို ရှန်ဟိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ က အကြမ်းဖက် နှိပ်စက် ဖမ်းဆီး နေ စဉ် photo: WSJ
FNG၊ ၊တရုတ်ပြည် တွင် ကုန်းဈေးနှုန်း ကြီးမြင့် မှု နှင့် လောင်စာ ဆီ ဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်မှု ကြောင့်
တရုတ်နိုင်ငံ ၏ အကြီး ဆုံး ဆိပ်ကမ်း မြို့ ဖြစ်သည့် ရှန်ဟိုင်း မြို့ ရှိ ဘိုရှန်း ခရိုင် ကုန် သေတ္တာ လွင်ပြင်
အနီး တွင်သုံး ရက် မြောက် နေ့ အဖြစ် ယနေ့ ဆက်လက် ဆန္ဒပြ နေသည် ဟု သတင်း ရရှိသည်။ထရပ်ကား အစီး ၂၀၀ ကျော် နှင့် ဆန္ဒပြသူ ၈၀၀ ကျော်က လမ်းများ ကို ပိတ် ဆို့ဆန္ဒပြခြင်း ဖြစ်
ပြီး တရုတ် အာဏာပိုင် များ က ရဲ နှင့် လုံခြုံ ရေး အင်အား ၁၀,000 ကျော် ချထား ကာ ဆန္ဒပြမှု
ကို ဖြိုခွဲခြင်း မပြု သေး သော် လည်း ဆွေးနွေး မည်ဟု အကြောင်း ပြကာ ဆန္ဒပြ ခေါင်း ဆောင် အချို့ ကို ဖမ်းဆီးမှု များ ရှိသည်။
The protests also suggest that tensions are growing in China over the gulf between the nation’s tiny elite and its poor majority. Incomes are rising, but inflation is
squeezing families and small business people like self-employed truckers, while profits at major state-owned companies are higher than ever. The New York Times report from CHINA ______________________________________________________________
ပူဒေါင် ခရိုင် တွင် လည်း ဆန္ဒပြသူ ၄၀၀ ကျော်က ကုန်ဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်မှု ဖြေရှင်း ပေးရန် တောင်း
ဆို ဆန္ဒပြ ကြသည်။ ဘိုရှန်း တွင် ဆန္ဒပြ နေသည့် ထရပ်ကား မောင်း သူ တစ်ဦးက ကျွန်တော် တို့တောင်းဆို ထား
တာတွေ ကို အစိုးရက မဖြေရှင်း ပေး သမျှ ကျွန်တော် တို့ ဒီနေ ရာ ကနေ ဆုတ် ခွာ မှာ မဟုတ်
ဘူး လို့နယူး ယောက် တိုင်း သတင်းစာ ကို ပြောသည်။
တရုတ် ပြည်တွင် မတ်လ နှောင်းပိုင်း မှ စ၍ ကုန်ဈေးနှုန်းများ ၇ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ၊
ငွေကြေး ဖောင်းပွမှု နှင့် လောင်စာ ဆီ ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်မှု့ ကြောင့် နိုင်ငံ တွင်း ဉ် မငြိမ်
မသက်မှု များ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
တရုတ် အစိုးရက ငွေကြေး ဖောင်းပွ မှု များကို ဖြေရှင်း နိုင် ရန် အစွမ်း ကုန် ကြိုစား သော်
လည်း အရာ မထင် ဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်သည်။
ထရပ်ကား မောင်းသူ များ ၏ တောင်းဆို ဆန္ဒပြမှု ဓာတ်ပုံ- http://www.reuters.com
Angry truckers in China protest rising costs (theglobeandmail.com)
Chinese Truck Drivers Protest Rising Fees and Fuel Prices (nytimes.com)
Chinese Trucks Idle as Protests Continue (online.wsj.com)
Chinese truck drivers protest against rising fuel prices (guardian.co.uk)
Chinese Truckers Strike For Third Day, Threatening China’s Exports (huffingtonpost.com)
Violent Trucker Fuel Protests In Shanghai (businessinsider.com)
Angry truckers in China protest rising costs (msnbc.msn.com)
Chinese Truckers Protest Over Costs (online.wsj.com)
Shanghai truck drivers strike over rising fuel prices – Toronto Star (thestar.com)
Tags: Business, China, Inflation, Pudong, Shandong, Shanghai, truck, Truck driver	From: သတင်း, ပြည်ပသတင်း	← အရီဇိုးနား လွှတ်တော် အမတ် ဂျွန်မက်ကိန်း ဘန်ဂါဇီ သို့ ရောက်ရှိ
ယီမင် သမ္မတ နှုတ်ထွက်ပေးမည့် အစီအစဉ် ကိုလက်ခံ ပြီ →
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,530,789 hits
Thailand will hold elections by February 2; Yingluck may not be her party's choice to run, government spokesman says. 1 day ago
Follow @freedomnews_usFNG ၏ သတင်း နှင့် ဖော်ပြ ထား မှု များ ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုရန် Select Month December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 FNG LATE NIGHT SHOW Myanmar News in Englishmyanmar-sea-games-reuters-101213.JPGMyanmar starts biggest SEZ projectMyanmar beat Timor Leste to record second straight winMyanmar boleh pintas Malaysia dalam hak asasi manusia, kata SuhakamSEA Games: Myanmar hosts international coming-out partyLuxury river cruise to sail Myanmar waters next yearmyanmar-travel-AFPrelax-101213.jpgMyanmar hosts international coming-out partyWant Burma info in your inbox each morning?